Portable Dota Game — MYSTERY ZILLION
Portable Dota Game
June 2009 edited June 2009 in File Request
Dota Game ကို Portable ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်..AI ပါတယ့် portable version လေးတွေ မျှပေးကြပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ:77::77::77:
ိဆော့နေသမျှ dota game မှန်သမျှက portable လို ့ပြောနိုင်ပါတယ် Install လုပ်ပြီးသားဂီမ်းကို
stick နဲ ့သယ်သွားပြီးနောက်တစ်စက်မှာဒီတိုင်း copy paste ရုံနဲ ့ဆော့လိုရပါတယ် install လုပ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျ
Tsuna lade ပြောတာ နောက်တာမဟုတ်ပါ .. တကယ်ပါ ... မယုံရင် Dota install လုပ်ပြီးသားစက်ထဲက Program files အောက်က Frozen Throne Folder ကို stick နဲ့ copy ကူးသွား .. အိမ်ရောက်ရင် ကိုစက်ထဲက Program files အောက်မှာ Paste လုပ် .. Desktop ပေါ် Shortcut ထုတ် ... ဆော့ ... အားလုံးအထစ်အငေါ့လုံး၀မရှိပဲအဆင်ပြေနေတာတွေ့မှာပါ ..
:103: :103: :103:
ပြီးတော့ Dota Allstar Latest Map တွေကို www.getdota.com တွင် Free Download ပေးထားပါတယ် .. AI Map တွေကိုလဲ Tab တစ်ခုအနေနဲ့ Down ခွင့်ပေးထားပါတယ် ..သိပြီးသားဆိုရင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ..:103:
အလိုတော့ ရပါတယ် ကျနော် ဆန်းတာ window7မှာ အလို လုပ်လို့ မရပါဘူး window xp တို့ ဘာတို့ ပဲရတယ် ဗျ
ရပါတယ် ... တစ်ကယ်ပြောတာ ပြန်စမ်းကြည့်
အလိုရတာတော့သိတာပေါ့ဗျ....တကယ့် Portable မှမဟုတ်တာကို..
stıck ထဲက frozen throne.exe ကို run လို ့လဲရပါတယ် stıck ထဲကနေ copy မလုပ်ပဲ အဲဒီတော့ portable လိုပြောရင်လည်းရပါတယ် :):) သွားလေရာယူသွား အင်တာနက်ဆိုင်မှာကွန်မကောင်းရင် double clıck နှိပ်တာနဲ ့ဆော့လို ့ရတယ် :D:D
Connection ကောင်းရင် Dota Patch ထည့်ထားပြီးသား Frozen Throne လေးများ
ကျနော့် OS က Vista ပါ။ သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် တင်ပေးကြပါနော်။
ဆော့ချင်နေတာ လက်ကိုယားလို့။ :d
အကိုရယ်တင်တော့တင်ပေးချင်ပါတယ် 1gb ကြီးတောင်ဆိုတော့ ကော်နက်ရှင်ကောင်းရင်တောင်မလွယ်ဘူး
လိပ်ရေ...ကျွန်တော်ကို Mario portable လေးတင်ပေးပါလားခင်ဗျာ...အပြင်းကြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
အာဝု.... ၁၀၀ .. ၂၀၀ မက်လောက်ထင်လို့ဗျ... လွယ်ဘူး ၁ ဂစ်ဆိုရင်တော့
ဂလိုဆိုရင်တော့ အပျင်းမကြီးပဲ သူများစက်ကနေသွားကူးရမှာပဲ
နာရီဝက်ကျော်ကျော် ကုန်းကြောင်းလျှောက်ရလို့ ... :d
game site new lay win yoke ar pay bar onn .
www.mmpcgames.blogspot.com ku ma pyin sin tone